Wasiirka Amniga Puntalnd: “Weerarkii Al-shabaab ee Bali-khadar waxaa hogaaminayay saraakiil Somaliland” (dhegayso) – Radio Daljir
Wasiirka Amniga Puntalnd: “Weerarkii Al-shabaab ee Bali-khadar waxaa hogaaminayay saraakiil Somaliland” (dhegayso)
Juunyo 2, 2018 11:00 b 0
Dowladda Puntland ayaa ka hadashay weerarka xalay ay ururka Al-shabaab kusoo qaadeen ciidamo katirsan Puntland oo saldhig ku leh deegaanka Bali-khadar ee gobolka Bari.
Wasiirka amniga Puntland Axmed Cabdulaahi Yuusuf Dowlad ayaa waxaa uu sheegay weerarkaasi inay hogaaminayeen saraakiil katirsan Somaliland oo uu ka mid ahaa nin lagu magacaabo Maxamed Cabdulaahi Bootaan, oo ah nin reer Burco ah oo kasoo jeeda beelaha Somaliland ee deegaankaasi.
Wasiirka ayaa xusay ujeedka weerarka looga gol leeyahay inuu yahay in dowladda Puntland iyo indha caalamka looga weeciyo duulaanka Somaliland ay ku joogto gobolka Sool, waxaana uu sheegay maamulka Somaliland iyo Al-shabaab inay ka midaysanyihiin wax yeeleenta umadda Soomaaliyeed.
Axmed Cabdulaahi Yuusuf Dowlad ayaa sheegay weerarka xalay in laga hortagay, dowlad ahaana ay ku filanyihiin kahortagga weerarada Al-shabaab.
Dowladda Puntland ayaa ciidamo badan dhigta waddooyinka magaalooyinka Puntland ku xira dhulka buuralayda ah er Calmadow, waxaana la rumaysanyahay meesha kaliya ay saadka iyo ciidamaduba ka helaan Al-shabaab uu yahay magaalada Burco oo aan wax badan ka fogayn buuralayda Golis ee Puntland iyo Al-shabaab ay ku dagaalamaan.
Koox hubaysan oo ciidamo katirsan dowladda ku weerartay Muqdisho